Fahazoana mifanitsy: Ataovy virtoaly Mac sy Windows amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Betsaka ny rindranasa mamela anao fehezo ny Mac na Windows PC amin'ny iPad-nao, fa ny marina dia tsy nisy tonga tamin'ny tena ilana azy amin'ny takelaka toa ny iPad, mainka fa ny iPad Mini. Izy ireo dia mbola birao solosaina amin'ny efijery 9,7-inch (7,9 amin'ny tranga iPad Mini) ary miampy ny fanampiana dia tsy maintsy fehezinao amin'ny rantsan-tànanao izany, izay matetika ny vokatra dia tsy tsara. Parallels Access dia tonga amin'ny iOS hanovana an'ity, ary manolotra a tena mety ny miasa miaraka amin'ny solosainao amin'ny efijery iPad.
Tamin'ny fotoana voalohany, tsotra ny fikirakirana ny fampiharana. Tsotra ny fikirakirana azy: apetrakao ny rindranasa (maimaim-poana) avy amin'ny App Store amin'ny iPad anao, apetrakao Agent agnisan'ny Desktop Access amin'ny solosainao (mifanaraka amin'ny Mac sy Windows), dia misoratra anarana amin'ny Parallels maimaimpoana ianao ary mampiditra ny antsipirihanao amin'ireo rindranasa roa (iPad sy solosaina), ary efa tafatsangana daholo ianao. Hiseho ny efijery iray toa ilay hitanao amin'ny sary, afaka mifandray amin'ny solosainao. Andao hojerentsika ny fomba fiasan'izy io amin'ny fampiasana ny iMac ho solosaina lavitra.
Ny fampiharana dia aseho amin'ny efijery feno amin'ny iPad-nao, mampiseho ny Mac LaunchPad, ilay efijery izay vitsy mahita fa mahasoa ary toa toa misy dikany ihany ny Parallels. Avy amin'izany no ahafahantsika miditra amin'ny rindranasa rehetra izay hisokatra amin'ny solo-saintsika. Amin'ny fipihana ny bokotra eo amin'ny zoro ambany ankavanana dia hiditra amin'ny multitasking isika, miaraka amin'ireo rindranasa misokatra rehetra.
Afaka miditra amin'ny varavarankely isika amin'ny alàlan'ny fanindriana azy ireo, na manidy azy ireo amin'ny alàlan'ny fipihana ny "x" eo amin'ny zoro ankavia ambony.
Araka ny hitanao, ireo varavarankely dia nifanaraka tanteraka tamin'ny efijery an'ny iPad antsika, ary afaka mamakivaky azy ireo amin'ny alàlan'ny fifehezana ny iPad, izany hoe ny rantsantanana. Ny fihetsika IPad dia miasa tanteraka rehefa ao amin'ny Parallels Access isika, ahafahantsika mifehy ny solosaintsika amin'ny fihetsika mikasika.
Na ny safidy aza mifidy, mandika ary apetaho ny asa tahaka ny ataony amin'ny iOS, miaraka amin'ireo menus contextual mitovy. Azonao atao ny mandika lahatsoratra avy amin'ny Safari amin'ny Mac ary apetaho ao amin'ny Mail amin'ny iOS.
Ny fampiharana dia manana kely ihany koa bara eo amin'ny ilany ankavanana, izay azontsika afenina amin'ny fivezivezena miankavanana, na anaovantsika izany amin'ny fivezivezena miankavia. Amin'ny filaharana midina dia ho hitantsika ireo hitsin-dàlana ho an'ny multitasking, launchpad, setting ary keyboard. Ao amin'ny fikirakirana ny rindranasa dia hahita safidy toa ny pointer totozy hiseho isika, fomba birao (Desktop Mode) izay ahitantsika ny Mac Dock, sy ny fanaraha-maso ny feo.
Ny kitendry ananantsika ao amin'ny Parallels Access dia feno kokoa noho ny iOS, miaraka amina laharana ambony fanalahidy izay manolotra fiasa izay tsy misy ao amin'ny iOS ary azontsika ampiasaina amin'ny Parallels Access, ary manana ny bokotra arrow aza isika.
Na dia nifanaraka tsara aza ny interface dia hisy ny rindranasa izay misy bokotra tsy azo idirana. Ny rindranasa dia manana rafitra «maminavina» izay tianao tsindriana na dia tsy dia marim-pototra aza ianao, fa mba hahamora kokoa ny raharaha, raha mitazona faritra iray ianao hiseho vera manelatselatra, izay ahafahanao ho marimarina kokoa rehefa manindry bokotra na menio kely.
Parallels Access ho an'ny iOS dia fampiharana maimaim-poana, mitovy amin'ny fampiharana takiana amin'ny Windows sy Mac OS X, saingy tsy maimaim-poana ny serivisy. Ao anatin'ny fampiharana, amin'ny alàlan'ny rafitra mpividy mividy, azonao atao ny mahazo fidirana amin'ny solosaina mandritra ny herintaona amin'ny vidiny "maotina" 69,99 euros. Ny fampiharana dia mamela antsika hizaha toetra azy amin'ny fiasa feno mandritra ny 14 andro, ary avy eo hitohy hiasa ihany, fa kosa mametra ny fotoana ahazoana miditra.
Fanazavana fanampiny - TeamViewer QuickSupport, rindrambaiko fanohanana lavitra vaovao ho an'ny iPhone sy iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fahazoana mifanitsy: ataovy virtoaly Mac sy Windows amin'ny iPad anao
Toa tsara ny fampiharana saingy efa zatra an'io aho ary mbola mampiasa ilay mpandinika ny ekipa satria manana ny fianakavianako PC sy Mac ampidirina ao amin'ny kaontiko, ary maimaim-poana tanteraka izany raha mpampiasa manokana ianao ary ny tena marina dia tsy misy tantana miaraka amin'ny ipad mini ratsy ahy koa 🙂
Nanandrana mpandinika ekipa aho ary tamin'ny farany rehefa nanandrana ny logmein dia nijanona niaraka tamin'ireto farany aho, fantatrao ve taorian'ny 14 andro nanaovana andrana hoe ohatrinona ny fotoana ahafahanao miditra?
Tsy mbola nahita vaovao momba an'io aho.
Ny interface dia tsy mitovy amin'ireo nanandrana ahy hatreto. Fa manana olana aho. Rehefa manokatra ny fampiharana ao amin'ny ipad 3 miaraka amin'i JB aho… .crash! Misy olon-kafa mitranga? Vahaolana? Misaotra!
NetworkList: tahirizo ny angon-drakitra fidirana amin'ny tamba-jotra WiFi (Cydia) anao
iKeyMonitor: Keylogger ho an'ny iPhone, iPod, iPad (Cydia)